छापकूट - Presse-Nachrichten.com
§ अनुसार5TMG:
मालिक: थोमस Baumgartner
Lohauser क्षेत्र 54a मा
Miglied IHK डुसेल्डर्फ
Händlerbund को सदस्य
VAT आईडी।: DE815113734
एक सेवा प्रदायक हामी § अन्तर्गत जिम्मेवार छन्7सामान्य कानुन अन्तर्गत यी पृष्ठहरूमा हाम्रो आफ्नै सामग्रीको लागि 1 TMG जिम्मेवार. अनुसार §§ 8 गर्न 10 TMG हामी एक सेवा प्रदायक बाध्य छन्, संचरित वा भण्डारण गरिएको जानकारी निगरानी गर्न वा परिस्थितिमा छानबीन, जो अवैध गतिविधि उल्लेख. हटाउन वा सामान्य नियम अन्तर्गत जानकारी प्रयोग गर्न बन्देज दायित्व unaffected रहने. तर, एक सान्दर्भिक दायित्व मात्र सम्भव विशिष्ट उल्लङ्घन ज्ञान को मिति देखि छ. मा यस्तो उल्लंघन को सूचना, हामी सामग्री तुरुन्तै हटाउने.
लिंक लागि दायित्व
हाम्रो साइट बाह्य वेबसाइटहरु लिंक समावेश, जो माथि हामी कुनै नियन्त्रण. त्यसैले हामी यो बाह्य सामग्रीको लागि कुनै पनि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सक्दैन. पृष्ठहरूमा को प्रदायक वा अपरेटर सधैं कुनै पनि लिंक साइट सामग्रीहरू लागि जिम्मेवार छ. लिङ्क गरिएको साइटहरु सम्भव कानुनी उल्लंघन लिङ्क को समयमा जाँच थिए. अवैध सामग्रीहरू छैन स्पष्ट लिङ्क को समयमा थिए. लिङ्क गरिएको पृष्ठहरू स्थायी नियन्त्रण उल्लङ्घनको को ठोस प्रमाण बिना अव्यावहारिक छ. मा उल्लंघन को सूचना, हामी तुरुन्तै यस्तो लिंक हटाउने.
मेटाउने / हाम्रो प्रेस पोर्टल देखि लिंक हटाउन, को
छैन अन्तर्गत §§ 8 गर्न 10 TMG खसेको, chargeable छ!
हामी एक पटक यो गणना 10 यूरो थप MwSt.
सम्पादन / यो प्रेस विज्ञप्ति जारी मा संशोधन,
प्रक्रिया / यो प्रेस विज्ञप्ति जारी मा संशोधन, chargeable छ!
साइट संचालक द्वारा सिर्जना यी पृष्ठहरूमा सामग्री र काम जर्मन प्रतिलिपि अधिकार कानून विषय हो. दोहराव, प्रशोधन, वितरण र प्रतिलिपि अधिकार कानून को सीमा बाहिर शोषण को कुनै पनि प्रकारको लेखक को लिखित सहमति आवश्यक. निर्माता. डाउनलोड र प्रतिहरू निजी प्रयोग मात्र हो, गैर-व्यावसायिक प्रयोगको. जहाँसम्म सामग्री रूपमा वेबसाइट संचालक द्वारा सिर्जना गरिएको छैन, तेस्रो दल को प्रतिलिपि अधिकार सम्मान गर्दै. विशेष, तेस्रो पक्ष सामग्री जस्तै लेबल. तपाईं अझै पनि प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन सजग हुनुपर्छ, हामी सुझावको लागि अनुरोध. मा उल्लंघन को सूचना, हामी सामग्री तुरुन्तै हटाउने.
अनलाइन विवाद संकल्प facilitators नियमावली अनुसार नोट
वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत, हामी बाध्य छन्, युरोपेली अनलाइन विवाद संकल्प मंच को अस्तित्व गर्न उपभोक्ताहरु संकेत गर्न, जो विवाद को बन्दोबस्त लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक अदालतले चालू हुनुपर्छ बिना. युरोपेली आयोग प्लेटफर्म स्थापना को लागि जिम्मेवार छ. युरोपेली अनलाइन विवाद संकल्प मंच यहाँ पाउन सकिन्छ: http://ec.europa.eu/odr. हाम्रो इमेल: presse@thb-marketing.com
तर हामी दर्शाउन, हामी तयार छैनन् कि, विवाद बन्दोबस्त प्रक्रियामा युरोपेली अनलाइन विवाद संकल्प मंच सहभागी. हाम्रो माथि इमेल र फोन नम्बर खुसी सम्पर्क गर्न प्रयोग.